Samsung Galaxy S3, terminal-kaaga ma ka badbaado dhimashada lama filaanka ah? | Androidsis
Xalka ugufiican ee aad Samsung Galaxy S3 kaaga badbaadin karto dhimashada lama filaanka ah ee baqdinta leh
Waxaan horey uga hadalnay qoraal hore oo ku saabsan cabsida geeri kedis ah in ay saamaynaysay nooc gaar ah oo ka mid ah kuwa ka shaqeeya Samsung Galaxy S3 iyo in ay xal u helida dhibaatadaHagaag, xalka ugu weyn ee aan tilmaannay kaas oo ahaa cusbooneysiinta rasmiga ah midkoodna OTA ama dhex mara Kies, waxay umuuqataa inaysan siinaynin natiijooyinka ugu fiican.
Sida laga soo xigtay warbixinnada adeegsadayaal badan, waxay noo sheegeen in ilaa iyo cusboonaysiinta qalabkooda, ay inta badan laalaadaan xitaa ay dib u bilaabaan illaa laba iyo saddex jeer maalintii sabab la’aan, taasna waxaa laga yaabaa inay ugu wacan tahay inuu processor-ku aad u taabtay iyo cusbooneysiinta Samsung ee soo daahay ayaa laga yaabaa inaysan waxtar badan kuu lahayn.
Waxay u badan tahay, aaladaha ay wataan jajabyada ay saameyntu ku dambayn doonto garaacista, taas oo haddii ay kugu dhacdo adiga inta ay damaanadku shaqeynayaan, wax cabsi ah aadan qabin tan iyo adeegga rasmiga ah ee Samsung Waxay ku beddeli doontaa iyada oo aan kharash lagaa raadinaynin, dhibaatadu way timaaddaa, markii waqtigu dhammaado oo terminalku ku dhammaado garaacid marka muddada dammaanadda rasmiga ah ay dhammaato, taas oo ay dhacdo inaad ka baxdo Samsung Galaxy S3 oo waa inaad adigu iskaa u qaadataa kharashka dayactirka ee adiga kugu kacaya, taas oo waddada aan raqiis ahayn.
Tan waxaan uga jeedaa Samsung, halkii laga hirgalin lahaa xal dhab ah dhibaatada geerida lama filaanka ah ee Samsung Galaxy S3Waxa ay qabatay waxay ahayd in la sameeyo fudge aad u weyn si ugu yaraan waqtiga loo badbaadiyo loona badbaadiyo kumanaan badan oo Yuuro ah oo ku saabsan dayactirka iyo beddelka jajabkan ay saameeyeen dhimashada lama filaanka ah ee lama filaanka ah.
Xalka kale si aad isugu daydo inaadan u dhiman Samsung Galaxy S3-kaaga
Nasiib wanaagse waxaan haysanaa qalab dibedda ah Samsung taas ayaa noo oggolaaneysa shumac roms la kariyey by khubaro horumariya madaxbanaan kuwaas oo ku dhowaad gebi ahaanba fududeeyay cilladda dhimashada lama filaanka ah ee lama filaanka ah ee laga hadlayo in badan.
Xalka ugu fiican ee lagu tijaabiyo magacaaga cusub Samsung Galaxy S3 waxay qaadataa sannado badan shaki la'aan waa mid ka mid ah si toos ah qaar ka mid ah rom beddelay la version of Android 4.1.2 ama ka sareeya maadama roomaaniyiintani ay badanaa la yimaadaan iniin wax laga beddelay iyo sixitaan durba la hirgeliyey si waxyeelada waxyeelada leh loo yareeyo ugu badnaan.
Halkan Androidsis waxaad u haysaa cashar buuxa xididka koowaad oo rakib soo kabashada la beddelay o Soo kabashada Clockworkmod kaas oo aad markaa si raaxo leh oo hufan ugu iftiimin karto ROM kasta oo loo kariyey terminaalkan xiisaha leh Samsung.
La soco barta sida aan kuugu soo bandhigi doono roms-ka la kariyey loogu talagalay adiga Samsung Galaxy S3; Waqtigan xaadirka ah waxaan kaaga tagayaa mid ka mid ah romerka ugu fiican ee jira, Vanilla RootBox leh Android 4.2.1 iyo habka loo rakibo.
Macluumaad dheeraad ah - Samsung Galaxy S3, sida loo xaliyo dhibaatada dhimashada lama filaanka ah, Samsung Galaxy S3, Root iyo Soo Celinta Android 4.1.2, Samsung Galaxy S3, Rom Vanilla RootBox Android 4.2.1 oo leh xakameynta PIE,
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xalka ugufiican ee aad Samsung Galaxy S3 kaaga badbaadin karto dhimashada lama filaanka ah ee baqdinta leh
Maxay tahay hick. SDS (geeri lama filaan ah) waa inay laxasuustaa xusuusta gudaha, maahan CPU, dhammaan romans-ka samsung-ka leh 4.1.2 waxay leeyihiin xalka DEFINITE Haddii mobiilku si xun u socdo, ha dhigin wax caajis ah ama ha fuulin foxhound rom-ka, laakiin moobilku ma jabayo.
Ku jawaab pelagarcia
Waxa ugu horreeya ee aanan arkin waa lagama maarmaan in la caayo iyo tan labaad haddii aad u baahato inaad fiiriso waxa ay tahay inaad ku rakibto SGS3 si aad u rabto qajaar aad u tiro badan oo moobiil ah?
Ah wixii ku saabsan sixitaankaaga, boostada waxaa loola dhaqmaa si wadashaqeyn ah oo markaa dadku u fahmaan.
Waxa aanan arkin waa lagama maarmaan waa in la qoro qoraalo hadaadan wax fikrad ah qabin. Saboolka kuwa raadinaya macluumaadka oo hel qodobkan.
Waxaan hayaa nooca 4.1.2 oo tan iyo shalay waxaan bilaabay inaan ciyaaro carrab la '. Maanta waxaan kaliya rebootiyay 6 jeer. Uma urin wax aad u wanaagsan aniga
Ku jawaab crls
Fiiji rooti la kariyey oo dhibaatada ka bax
Taasi waxba ma hagaajinayso.
Esther Elena TL dijo
Waxaan haystaa nooca 4.1.2 oo si qumman ayuu iigu shaqeeyaa, taasi waa haddii jabintaydu tahay bisha Noofembar.
Waxay i siineysaa in kuwa ka mid ah dufcaddii ugu horreysay ay u dhiman doonaan haa ama haa.
Jawaab Esther Elena TL
Sideed ku xaqiijin kartaa in jabku saameyn ku yeesho? Waxaa jira isticmaaleyaal tirtiray kadib qufulayaashan oo ay lumeen, haddii qashinku musuqmaasuqay wuxuu sii wadi doonaa inuu dib u bilaabo iyo dhibaatooyin. Farsamo ahaan sheeg waxa dhaawacmay.
Ku jawaab ro
Hagaag, waa maxay qaladka weyn ee qoraalkani yahay. Dayactirka ROM-ka ee wax laga badalay wuxuu ku saleysan yahay hagaajinta rasmiga ah ee ROM-ka, sidaa darteed hagaajinta ROM-ka wax laga badalay ayaa soo baxday.
Tan labaadna, kiisaska ugu badan, dib u bilaabida iyo qaboojinta waxaa sabab u ah cusbooneysiinta OTA iyadoon la tirtirin, maaddaama xogtu aysan 100% sii socon karin oo sababa khaladaad, taas oo lagu xalliyo iyadoo la sameynayo xogta tirtirka iyo ka tirtir qafiska ka soo kabashada asalka ah gudaha SGSIII.
Ma ogtahay in hagaajintii ugu horreysay ee u kacday in la saxo dhibaatada aysan fulin Samsung ee ay adeegsatay adeegsadayaasha xdadevelopers.
Xalka rasmiga ah ee Samsung wuxuu ku salaysnaa shaqadiisa.
Dhinaca kale, biligleynaya roomaha wax laga beddelay wax dhaawac ah uma geysaneyso terminaalka oo xitaa wuxuu maamulayaa inuu wax badan ka faa’iideysto.
Markay ahayd Maarso 5, 2013 21:01 PM, Disqus wuxuu qoray:
Waa run, laakiin xalka imika la hirgaliyay wuxuu ka yimid koodhka ay Samsung isticmaasho (oo aanan dhihin waxay sameeyeen, waxaan dhihi karaa waa Samsung Samsung patch rasmi ah).
Oo ku saabsan ROM-yada wax laga badalay, waad si khaldan ii fahamtay ama si fiican isuma muujin, waxaan ula jeedaa inaysan muhiim ahayn inay iska difaacaan SDS sababtoo ah waxay keeneen isla hagaajintii Stock iyo karisayba. Aniga qudhaydu waxaan ahay cunto kariye 🙂
Sida muuqata qaladka ugu weyn wuxuu ka yimaadaa maskaxdaada, inaad u maleyso in hagaajintani ay ka timid Stock ROMs, hagaajintani waxay ku saleysan tahay AOKP (sida RootBox) ama mashruuc kale oo rasmi ah oo android ah (AOSP ama CM) ... ka waran hadaan ahay ma xuma, waa noocyada ugu nadiifsan Android ee jira. !!
Dayactirka waxaa laga soo qaatay Samsung "Cusboonaysiinta 7". Samsung kee ku saleysan mid ka mid ah isticmaaleyaasha 'xda'? Waad awoodaa, laakiin lambarka hagaajinta hadda wuxuu ka yimaadaa samsung. La socodsii.
Diiwaangeli naftaada oo hubso ka hor intaadan sameynin boostada noocaas ah! Sidaan u fiirsaday Dhamaan rebootyada iyo barafowga tirtirka way baaba'aan. Haddii aad rabto inaad naga iibiso dulucda qolalka waa sheeko kale. Shay kale? Ma waxaad tahay farsamo yaqaan si aad u hubiso sidee baad u hubinaysaa in jajabkeena uu xumaaday?
Arch Angel Alejandro Mendoza dijo
In kasta oo aadan rumaysan, haddana xalka si uusan u dhicin waxyeello soo gaadhay qalabku waxay ahayd iyada oo loo marayo softiweer. Waa xalka ay bixiso Samsung si uusan u dhicin. Marka sidoo kale ha helin cabsi-gelin, adiguba u sheeg
Jawaab Arq Angel Alejandro Mendoza
MA Garcia # 16M dijo
Dammaanad kama qaadin dammaanadda, waxaa jira kiisas badan oo dhimasho lama filaan ah leh oo dammaanadda laga joojiyay huurka oo ah cudurdaarka koowaad, qaar badan. Calaamaddu waxay keydineysaa lacag waxayna sii jirtaa dhererka shinida sanado badan.
Jawaab MA García # 16M
Nidaamyadaas noo sheegaya nooca t-Mobile-ka ma hagaagsan yihiin? Sgh-t999. Waxaan ku tijaabiyay arjiga eMMc nooca nuucyadiisa kaladuwan ayaa ka duwan kan aaladaha keena dhimashada lama filaanka ah laakiin waxaa jira waqtiyo uu qalabku i weydiisto inaan dib u bilaabo kadib markaan sidaas sameeyo, cusbooneysiinta dalabka ayaa soo muuqanaya. Taas ka sokow, t-moobiilku weli ma uusan qorsheyneynin inuu soo bandhigo 4.1.2 qalabkiisa, iskaba daa 4.2. Waxaa la iisoo jiiday inaan qol ku rakibo, laakiin kuwa aan arkay oo dhan ayaa loogu talo galay moodellada kale midkoodna loogu talagalay t-Mobile Mobile sgh-t999. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aad iga caawin karto sidii aan meesha uga saari lahaa shakiga aan ka qabo arrintan. Mahadsanid
Ku jawaab Carlos bunia
Saaxiib malaha qaabkaaga terminal ma shaqeynayo
Markay ahayd 06/03/2013 01:34 PM, «Disqus» ayaa qoray:
Muxuu yahay qoraal aan micno lahayn. Maxaad damacsan tahay inaad "iibiso" ROMS-ka "kariyey"? Dhanka kale, baytariyada is-buuxinaya ma horeyba ayey u soo baxeen?
SALAAN !! Waxaan qabaa su'aal, waxaa la igu dhiirrigaliyay inaan iibsado s3 laba maalmood gudahood, laakiin markaan aqriyay dhibaatooyinkaas oo dhan mar dambe ma garanayo waxa la sameeyo. Su'aashu waxay noqon laheyd hadii aan hada iibsado, (sida ku xusan dukaanka canshuuraha waa inay keenaan qalab cusub maalmo kooban oo dheeri ah) ma waxay noqoneysaa hadii aan iibsado mid ka mid ah kuwaan heli doono moodel dhowaan soo baxay?
Ugu dambeyntiina ma garanayo waxaan sameeyo, waxaan arkaa in taleefanka gacantu aad u fiican yahay, laakiin isla waqtigaas dhibaatooyinkaas oo dhan ……… Ma garanayo, maxaad ku talinaysaa ??? Mahadsanid!
Haddii aad marin u leedahay * Play Store *, ku iibso * Nexus 4 16GB * nus ka mid ah waxa uu qiimihiisu yahay Galaxy S3 isla markaana leh farsamooyin isku mid ah ama ka wanaagsan.
Aah! iyo cusbooneysiinta otomaatiga ah adigoon sugin * Samsung * inay rabto inay fuliso.
Markay ahayd Maarso 7, 2013 04:46 PM, Disqus wuxuu qoray:
Aynu aragno ... in ilmahani sharxayo wax kasta badh haa, laakiin ha iskutallaabin isaga haddaadan naftaada aqoonin ...
Xalka kaliya ee SDS waa in romaanta loo badalo mid hada socda, wixii ka dambeeya Janaayo 2013. in kasta oo loo maleynayo in wax koodh ah oo 4.1.2 ah uu shaqeynayo oo laga helo samsung .. Weli waxaan kugula talin lahaa inuu noqdo a mid hadda jira.
Shaqsi ahaan, waxaan dhigay Boqortooyada Midowday (EMB5), oo si dirqi ah ku soo baxday .. markaa in kasta oo xalka dhabta ahi uu noqon doono in la beddelo DHAMMAAN xusuusta xusuusta ee aan weligeed dhici doonin .. markaa waxa ay sameeyeen wuxuu ahaa barnaamijka barnaamijka wax si aanu u dhaawicin jab .. intaas waa intaas ..
Qof walba, ma ahan oo keliya kan waxa qoray, sidoo kale waa la la'yahay.
Gabagabadii, ka cusbooneysii rooma ilaa keydka ama "kariyo" sida aad doorbideyso, laakiin sii daa dhowaan oo xusuusnow in xalka uu yahay firida oo uusan aheyn romanka.
Sida la doorbido inaad cusbooneysiiso bogsashadaada sidoo kale.
cute boy waa maxay taasi Fadlan ii sheeg sida aan ku xallin karo dhibaatada qolkeyga waxa barnaamijkeedu yahay 04248342327 ee Venezuela haddii aadan dhigin horgalaha hore…. Mahadsanid
Jawaab Joyce Maria Noguera
Caawin pls, Waxaan aaday dukaanka si aan u arko S3 oo aan u hubiyo taariikhda waxsoosaarka oo ay ku qoran tahay 2013.6.28 Waxaan ula jeedaa inay tahay Janaayo, markaa dhowaan unuga ayaa xor u ahaa inuu si kedis ah u dhinto?
ka hubi xasuustaada barnaamijka emmc hubiyaha bilaashka ah
Markay ahayd Maarso 8, 2013 01:08 PM, Disqus wuxuu qoray:
Francisco Ruiz Waxaan horey u cusbooneysiiyay nuqulka ilaa 4.1.2 laakiin wali waxay igu sheegeysaa codsigeyga in taleefankayga gacanta uu kujiro qatar geeri ah, taas oo ah in la yiraahdo, qashinkeyga wali halis ayuu kujiraa…. Waxaan ku qanciyey shalay aniga oo leh FC-ROOt cayiman wax sidan oo kale ah oo aanan xasuusanin waxa kale ... walina wuxuu ii sheegayaa isla wixii .... maxaad ku talinaysaa ???
Waxaan haystaa Galaxy S3 oo ay ku jiraan guddiga fashilmay waxaanan u cusbooneysiiyaa Samsung 4.1.2 rasmiga ah laakiin waxaan haystaa 2 toddobaad oo taleefankayga gacanta lagu hakinayo wixii codsi ah ama shaashadda weyn ama shaashadda xidhan, waa inaan riixaa oo ku dheji badhanka Daarka in ka badan 10 ilbidhiqsi si ay dib u bilowdo, mar hore ayaan sameeyay xog tirtir iyo keyd isla markaana dib u soo celiyey FW oo ay sii wadato joojinta 4 ama 5 jeer maalintii, maxaad igula talinaysaa inaan sameeyo? Waxaan ku rakibey romankan caadada ah ama mid kale ama maxaad kugula talineysaa ????? damqasho
Sheila G. Alvarez dijo
Tani waxay igu dhacday aniga shalay, Si lama filaan ah ayey u damisay, mana noqon karto mid shidan ama ku dhegan
hadda ... Waxay ahayd inaan kala furo oo aan dib u soo ururiyo oo sidii ay u shaqeysay. Ma xasilloon gabi ahaanba, hadda markaan daarto shaashadda way qaadataa
in ka badan caadi oo aan baqayo, yaa ii xaqiijiya in isla waxaas oo kale mar dambe igu dhici doonin? Waxaan iibsaday bishii Ogosto hadana akhrinta tan ayaa iga dhigeysa rajo xumo maxaa yeelay wali waan bixinayaa. Si saraaxad leh, waxaan u arkaa waxaas oo dhan oo ku saabsan biligleynaya qolalka la kariyey oo murugsan mana garanayo waxa kale. Ma jiraan fursado dheeraad ah?
Jawaab Sheila G. Álvarez
Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa sida loo dhiso HTC One